Archive du 20180314
Ady teny amin’ny fitsarana Resy ny fanjakana
Nofoanan’ny filankevi-panjakana omaly ny didim-panjakana manaisotra ny tonia mpampanoa lalàna ambony,
Misaona ny MAPAR Nodimandry i Nirhy Lanto Andriamahazo
Nodimandry omaly talata 13 martsa tamin’ny iray ora maraina teny amin’ny Espace Médical Mpitsabo Mikambana Ampasanimalo i Nirhy Lanto Andriamahazo.
Antenimieram-pirenena Nisavorovoro tanteraka
Nitrangana savorovoro teny amin`ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza omaly ka tsy tontosa ny ``commission plénière" amin`ny fandinihana sy fandaniana ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana.
Gidragidra noho ny fifidianana Azo sorohana tsara
Ny diplaomasia tsy maintsy asiana rehefa miresaka. Nilaza ny tompon’andraikitra eoropeanina fa hanampy amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny ECES izay miasa eto amintsika omaly nandritry ny fampahafantarana ny tetikasan’izy ireo ho fisorohana sy fitantanana ny ady mety hitranga mandritry ny vanim-potoan’ny fifidianana.
Filoham-pirenena Indiana tonga eto Madagasikara Hanamafy ny fiarovana ny tombontsoan’ny Karana
Hanatanteraka fitsidihana ofisialy eto Madagasikara ny filoham-pirenena Indiana, Ram Nath Kovind sy ny vadiny manomboka anio alarobia 14 ary hitohy rahampitso alakamisy 15 martsa.
Lisi-pifidianana etsy amin’ny fokontany FMAA Mbola naverin’ny Ceni ihany ireo maty sy efa nifindra miisa 507
Nanao fanamarinana ny lisitr’ireo mpifidy ao amin’ny fokontany FMAA (Faravohitra-Mandrosoa-Ambatonakanga-Antsapanimahazo) ao amin’ny boriborintany voalohany ny tompon’andraikitra iray ao an-toerana tafaresaka tamin’ny Tia Tanindrazana omaly.
Aretin’i Madagasikara Sarotra sitranina
Niaiky ny rehetra fa niha mafy hatrany ny krizy teto Madagasikara, indrindra taorian’ireo fifidianana efa nandalo ary tsy mbola nisy voavaha.
Patrick Raharimanana Nohadihadian’ny zandary nandritra ny 7 ora
Dosie miisa 3 no nanaovana fanadihadiana an’i Patrick Raharimanana teny amin’ny Toby Ratsimandrava Andrefan’Ambohijanahary omaly talata 13 martsa, ka naharitra 7 ora ny fanadihadiana natao azy.
Fandorana dosie tao amin’ny ENMG Tsy hampihemotra ny Bianco
Namoaka fanambarana manoloana ny raharaha fandorana ny taratasim-panadinana tao amin’ny sekoly ambony manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha na ny ENMG ny teo anivon’ny Bianco omaly. Nanamafy ity sampandraharaha ity fa naheno sy nahalala ny zava-niseho.
Zaridaina eny Anosy Mbola betsaka ireo asa tsy vita
Tsy mbola vita tanteraka amin’ny ankapobeny ny fanavaozana sy ny fanamboarana ny zaridaina etsy Anosy izay navadika ho toeram-pitsangantsanganana sy fialan’ny ankizy voly.
Adala mirenireny eto an-drenivohitra Ny fanjakana no tompon’andraikitra voalohany
Mitombo isa hatrany ireo olona adala mirenireny eto an-drenivohitra sy ny manodidina tato ho ato.
Mponin’ny ambany tanàna Miaina anaty loto tanteraka
Mbola miangona eran’ny tanàna ihany ny rano maloto ao amin’ny fokontany Manarintsoa Atsinanana amin’izao na dia efa andro maromaro aza no tsy nirotsahan’ny ranon’orana intsony.
Filaharam-behivavy tao Betafo Antsirabe Ny lehilahy mpiaro ny zon’ny mpanjifa no nahazo fandrahonana
Nanana ny nampiavaka ny fanamarihana ny 8 martsa, andron’ny vehivavy maneran-tany tamin’ity taona 2018 ity ny vehivavy tao amin’ny distrikan’i Betafo Antsirabe,